China Spandex Jacquard Yakarukwa Yakakwira Kutambanudza Elasticity Inofema Mucheka WeYoga Jira Mugadziri uye Mutengesi | Wenchang
Spandex Jacquard Yakarukwa Yakakwirira Inotambanudza Elasticity Inofema Mucheka WeYoga Cloth
Item Kwete: kwc21-4081
Zvinyorwa: 88% Polyester 12% Spandex
Hunhu: inorwisa mabhakitiriya, kukwirisa, kukwirisa Ruvara Kutsanya, kudikitira, hunyoro Kusvinwa, nekukurumidza Kuomesa, Inonyaradza, Inofema
YeYoga, Exercise, Fitness, Chero Rudzi Rwekurovedza muviri, Kana Mazuva ese Use. Yoga Bra Sanganisa Fashoni, Basa Uye Kuitwa
Chinhu icho kwete KWC21-4081
Twill: Yakarukwa shinda uye weft shinda dzakarukwa kamwechete angangoita maviri shinda, ndokuti, 2 kumusoro uye 1 pasi kana 3 kumusoro uye 1 pasi. Kuwedzera warp uye weft kupindirana mapoinzi ekushandura chimiro chejira, pamwe zvinonzi twill jira. Hunhu hwemhando iyi yejira ndewekuti hwakakora uye iine simba rakasimba rehutatu-hwetatu. Pane matavi makumi matatu, matavi makumi mana, uye makumi matanhatu matavi.
Satin jira: yakarukwa uye weft zvakarukwa kamwechete angangoita matambo matatu, saka satin kuruka kunoita jira riwedzere, saka jira rakakora. Satin kuruka zvigadzirwa zvinodhura kupfuura zvakafanana bani kuruka uye twill kuruka zvigadzirwa, uye jira pamusoro riri kumeso, wakanaka uye anopenya. Plain kuruka, twill kuruka uye satin ndiyo nzira nhatu dzekutanga dzekuruka warp uye weft. Iko hakuna musiyano wakasarudzika pakati pezvakanaka nezvakaipa pano. Imwe neimwe ine hunhu hwayo. Pakati pavo, satin ndeyechokwadi akanakisa machira akachena ekotoni.
Ngatitaurei nezve mutero zvakadzama.
Satin satin inofanirwa kusiyanisa pfungwa ina: satin, satin strip, satin grid, satin jacquard.
Rudzii rwejira ndeye satin? Muchokwadi, kuburikidza nesumo izvozvi, iwe watove wakanzwisisa kuti "plain kuruka, twill, uye satin" ese machira, kwete chaiwo machira.
Mucheka we satin unowanzozivikanwa ndewe satini ine mitsetse, inonzi satin strip. Iwo maratidziro ndeye yakatwasuka mutsara wedzera (ona mufananidzo). Uchishandisa maitiro ekuruka kutanga uye nekudhaya, rudzi urwu rwejira rinowanzo kuve rakasimba ruvara. Haikwanise kutenga bhora, hazvisi nyore kupera.
Kune zvakare mhando yesatin, inonzi satin grid, inova zvakare yakasimba ruvara uye iri lattice mhando (ona mufananidzo).
Satin mitsetse uye satin grid kazhinji ndizvo zvigadzirwa zvekugadzirwa kwemahotera muhotera. Izvo zvakachipa uye zvakasarudzika uye zvinoshanda. Satin mitsetse uye satin grid anoshandiswa zvakare kugadzira makiti epamba, asi iwo ari mashoma zvakanyanya kufarirwa kupfuura satin jacquard machira.
Mucheka weJacquard: Iyo pateni pane iyo jira yakarukwa, kwete zvakajairika kudhinda, kana kusona. Kana jira rikave kuruka, iyo yakarukwa uye weft chimiro chinoshanduka kuita pateni, iyo yarn kuverenga yakanaka, tsono yekushinda tsinga yakakwira, haina kuremara, haina kupera, uye ine pfungwa yakanaka yekunyaradzwa. Jacquard inozivikanwa kwazvo mumusika, uye mabhedha e satin anotaridzika kunge epamusoro-soro uye anonaka. Kusiyanisa hunhu hwe satin, enzanisa iyo yarn kuverenga uye kuwanda.
Iyo satin inotaura zvakare nezve huwandu hwesimbi. Ngatitaurei nezve kuverenga kutanga, zvinova ndizvo zvatinowanzoona makumi matatu, makumi mana, makumi matanhatu, nezvimwe! Semuenzaniso, dzimwe shamwari vanozvidaidza kuti 30S ye30, zvakafanana, hapana mutsauko! Saka chii chaizvo chinonzi kuverenga? Ndinozvinzwisisa nenzira iyi:
Kuverenga ndiyo chiyero chehupamhi hwehuta. Semuenzaniso, gramu imwe yekotoni inogona kugadzirwa kuita makumi matatu emamita e1 mita, ayo ari makumi matatu, uye imwe gramu yedonje inogona kugadzirwa nemakumi mana emamita mita 1 kureba, ayo ari makumi mana; gramu imwe yekotoni inogona kugadzirwa kuita shinda makumi matanhatu. Shinda ine kureba kwemamita imwe ndeye makumi matanhatu. Muchokwadi, iyo yakakwira iyo kuverenga kuverenga, iyo yakapfava iyo jira. Iyo yakatetepa shinda ndeyekuruka, yakapfava uye yakasununguka jira rinenge riri. Nekudaro, machira epamusoro-soro anoda zvigadzirwa zvemhando yepamusoro (donje), uye zvakare ane zvinodikanwa zvepamusoro zvekutenderera zvigayo uye machira ekuruka machira, saka mutengo wemachira wakakwira zvakanyanya. Mucheka wepamusoro kuverenga jira harina kukodzera pamubhedha nekuti rakatetepa!
Zvadaro: Yakakwira Hunhu Isina Mvura 100% Yakatetepa Windbreaker Isina Mvura Isina Mhepo Jekete Kukwira Sutu Mucheka
Inofuridzirwa Tsika jira
Nylon Spandex Mucheka
Imwe jacquard jira